Iwate प्रान्त! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र फूड्स, विशेषता - Best of Japan
जाडोमा चुसनजी मन्दिर = शटरस्टक
१ 13 औं शताब्दीको अन्तमा, इटालियन व्यापारी मार्को पोलोले युरोपका मानिसहरूलाई सुदूर पूर्वमा सुनौलो देश भएको कुरा बताए। वास्तवमा त्यतिबेला सुन जापानमा उत्पादन भइरहेको थियो। मार्को पोलोले कसैबाट सुनेको जस्तो देखिन्छ कि इवाटे प्रान्तको हीराइजुमी धेरै धनी शहर हो। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई इवाटे प्रान्तमा परिचय गराउनेछु, जुन कहिलेकाँही यूरोपीयन मानिसहरूलाई पनि चिनिन्थ्यो।
Iwate को रूपरेखा
हीराइजुमी: चुसनजी मन्दिर
टोनो फुरुसाटो गाउँ जहाँ पुरानो शैलीको ग्रामीण परिदृश्य अवस्थित छ, टोनो, इवाटे प्रान्त, जापान = शटरस्टक
Iwate को नक्शा
इवाटे प्रान्त टोहोकु क्षेत्रमा छ र प्रशान्त महासागरको सामना गर्दछ। यो अओमोरी प्रान्तको दक्षिणमा छ। र यो होक्काइडो पछि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो प्रान्त हो।
इवाटे प्रान्तको जनसंख्या करीव १,२1,250,000०,००० मानिस छन्, जसमध्ये 70०% भन्दा बढी मोरियोका शहरमा केन्द्रित किताकामी बेसिनमा केन्द्रित छन्। अर्को शब्दमा, थोरै मानिसहरु अन्य विशाल क्षेत्रमा बस्ने। यदि तपाईं वास्तवमा कार द्वारा Iwate प्रान्तमा ड्राइभ, तपाईं आश्चर्यचकित हुनेछ आश्चर्यलाग्दो दृश्य Hokkaido जस्तै अनुसरण गर्नेछ।
यो यस्तो बसोबास गरिएको क्षेत्र हो, तर विगतमा एक समय यो ठाउँ हिराइजुमीको वरपर उन्नति भएको थियो। युरोपमा सरेको हिराइजुमीको समृद्धि पत्ता लगाउन तपाईं किन यात्रामा जानुहुन्न?
Iwate प्रान्त को Kitakami बेसिन मा Hanamori एयरपोर्ट छ। यो विमानस्थलबाट मोरियोकासम्म बसबाट झन्डै minutes 45 मिनेटमा छ जुन प्रान्त कार्यालयको स्थान हो।
Iwate प्रान्तमा तोहोकु Shinkansen को7स्टेशनहरु छन्। दक्षिणबाट, Ichinoseki स्टेशन, Mizusawa Esashi स्टेशन, Kitakami स्टेशन, शिन-Hanamaki स्टेशन, Morioka स्टेशन, Iwateumamakunai स्टेशन, Ninohe स्टेशन। त्यसो भए तपाईले आइकन प्रान्तमा शिink्कन्सेन राम्रोसँग प्रयोग गर्नु पर्छ।
चुसनजी मन्दिर, हीराइजुमी, जापान = शटरस्टक
हीराइजुमी इवाटे प्रान्तको दक्षिणपश्चिमी भागको एक धनी हरियो क्षेत्र हो। यहाँ फुजीहारा परिवारको आधार छ जसले ११ औं शताब्दीको अन्तदेखि लगभग years ० वर्षसम्म तोहोकु क्षेत्रमा व्यावहारिक रूपमा प्रभुत्व जमाएको छ। त्यस समयमा क्योटोको अदालतमा समुराई बीचको झगडा जारी नै थियो, त्यसैले तोहोकु क्षेत्रको फुजिहारा परिवारले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा यस भागलाई प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न सक्षम भयो।
फुजीहरा परिवारले चीन जस्ता विदेशी देशहरूसँग पनि व्यापार गर्‍यो। त्यस समयमा तोहोकु क्षेत्रमा सुन उत्पादन गरिएको थियो, त्यसैले तोहोकु क्षेत्र वास्तवमै धनी भूमि भयो।
फुजीहरा परिवारले हीराइजुमीमा एक पछि अर्को व्यापक मन्दिरहरू निर्माण गरेर हीराइजुमीलाई एउटा ठूलो शहरको रूपमा विकसित गर्‍यो। यो केन्द्रको चुसनजी मन्दिर थियो। कोन्जकिडो भवनको भित्री र बाहिरीपट्टि सुनको पत्ती सहित बनाइएको थियो। फुजीहरा परिवारले बनाएको भवन समूह आगोको चोटपटक गुमेको थियो धेरैपटक पछि। जे होस्, कोन्जिकिडो त्यस समयमा रहन्छ।
कोञ्जिकोडो एकदम मूल्यवान भवन हो, त्यसैले अब यसलाई कभर्रीट भवनहरूमा राखिएको छ।
मैले अलग लेखमा चुसनजी मन्दिरको बारेमा विस्तृत रूपमा लेखें। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया लेखलाई पनि हेर्नुहोस्।
यदि तपाईं जापानको टोहोकु क्षेत्र (उत्तरपूर्वी होन्शु) मा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, हिवईजुमी शहर, इवाटे प्रान्तको विश्व विरासत स्थल रहेको चुसनजी मन्दिरमा किन नजाने? करिब १००० वर्ष अघि तोहोकु क्षेत्रमा शक्तिशाली सशस्त्र सरकार थियो जुन क्योटोको शाही अदालतभन्दा लगभग स्वतन्त्र थियो। ...
जापान, इवाटे प्रान्तमा कोइवाई फार्म। कोइवाई फार्मको १०० बर्ष भन्दा बढी इतिहास छ, र १२ किलोमिटर x k किमि ठूलो फर्म Iwate = shutterstock मा छ
कोइवाई फार्म जापानको सबैभन्दा ठूलो निजी फार्म हो। यो बस द्वारा JR मोरियोका स्टेशनबाट minutes० मिनेट उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ।
यस फार्मको माउन्टको फेदमा लगभग 3000००० हेक्टर साइट छ। Iwate। करीव hect० हेक्टर "माकीबेन" नामको पर्यटन क्षेत्रको रूपमा खुला छ। यस क्षेत्रमा करिब 40०० भेडाहरू चरिरहेका छन्। यस मकीबेनमा त्यहाँ एउटा क्याफे छ। तपाईं पनि यस क्षेत्रमा घोडा सवारी अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
>> विवरणका लागि कृपया कोइवाई फार्मको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
wanko soba नूडल्स = शटरस्टक
इवाटे प्रान्त वानकोसोबा नूडल्सका लागि प्रसिद्ध छ। वानकोसोबा नूडल्स लगातार सेवा दिइन्छ ताकि कचौरा खाली नहोस्।
यदि तपाइँ वानकोसोबा नूडल्सको विशेष रेस्टुरेन्टमा जानुभयो भने, कर्मचारी तपाईको छेउमा आउनेछन्। कर्मचारीले तपाईंको कचौरामा सोबा चाउचाउहरू राख्छन्। तिमीले यो खानु पर्छ। जब तपाइँ खाना समाप्त गर्नुहुन्छ, कर्मचारीहरू अर्को सोबा चाउचाउहरूमा प्रवेश गर्छन्। यदि तपाईं अधिक खान सक्नुहुन्न भने, कचौराको ढक्कन बन्द गर्नुहोस्।
तपाई कति कप खान सक्नुहुन्छ?!?
नाम्बु इस्त्रीवेयर र जापानीज टेकअप = शटरस्टक
१ iron औं शताब्दीदेखि नै इवाटे प्रान्तमा राम्रो फलामवेयर बनाइन्छ। कुशल कारीगरहरूले बनाएका फलामका सामानहरू सम्पूर्ण देशभर जापानमा एउटा विषय बन्न पुगे, र यसलाई "Nambu Ironware" पनि भनियो र उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त भयो।
"Nambu" यो टोकुगावा शोगुनेट अवधि को क्षेत्र मा कुलको नाम हो। बिभिन्न फलामवेयर परम्परागत शिल्प आइटमबाट बनेको छ, जस्तै तातो पानी बोयलर र फलामको बोतललाई हावा चिमहरू, एस्ट्रियाहरू, आन्तरिक सामानहरू।
इवाटे प्रान्तमा, यी फलामका सामान स्मृति चिन्हको रूपमा बेचिन्छ। किनभने नम्बू फलामको सामान जापानमा धेरै प्रख्यात छ, तपाईं तिनीहरूलाई टोकियोमा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ।